Shiinaha warshad dhaldhalaalka adag iyo soosaarayaasha | Kingtai
Haddii aad waligaa baratay sameynta biinankaaga dhaldhalaalka ah, waxaad u badan tahay inaad la kulantay ereyada "dhaldhalaalka adag" iyo "dhaldhalaalka jilicsan." Waxaan u maleynayaa in dad badani ay qabaan su'aal isku mid ah: Waa maxay farqiga u dhexeeya labadooda? farqiga u dhexeeya dhaldhalaalka adag iyo dhaldhalaalka jilicsan ayaa ah muuqaalka alaabta la dhammeeyay. Biinanka dhaldhalaalka adag ayaa ah kuwo siman oo siman, oo leh midab wanaagsan oo midab leh. Dusha sare waa wireless, cirifka birta ee biinanka jilicsan ee jilicsanna waa wax isweydaarsi. Hababka labadaba waxay isticmaalaan isla qaab bir ah, labaduba waxay leeyihiin midabbo dhalaalaya oo firfircoon Laakiin waxaa jira xulashooyin gaar ah oo gaar u ah dhaldhalaalka jilicsan
Goorma Ayaad Xulaysaa Dhaldhalaalka adag Dhaldhalaalka adag waa kuwo waara oo xoqan u adkaysta marka la barbar dhigo dhaldhalaalka jilicsan. Dad badan ayaa doorta dhaldhalaalka adag dhaldhalaalka jilicsan sababta oo ah muuqaalka nadiifka ah, ee dhammaaday. Naqshado badan ayaa ka shaqeyn kara labada dhaldhalaalka adag iyo kuwa jilicsan labadaba, sidaa darteed inta badan waqtiga waxay ku dhacdaa doorbid shaqsiyeed. Biinanka dhaldhalaalka adag ayaa marka hore lagu buuxiyaa midab, ka dib wejiga biinanka ayaa hoos loo dhigayaa si uu u noqdo mid siman oo siman. Mashiinka iyo nadiifintu waxay ka dhigeysaa mid aan la jaan qaadi karin dhamaadka birta qaarkood. Haddii aad rabto dahaadh dahab ama qalin qalin caadi ah, ka dibna dhaldhalaalka adag ayaa laga yaabaa inuu yahay xulasho wanaagsan qaabeyntaada.
Biinanka dhaldhalaalka adag way ka sii adkeysi badan yihiin oo xoqan ka xoqan yihiin biinanka dhaldhalaalka jilicsan.
Dad badan ayaa doorta dhaldhalaalka adag dhaldhalaalka jilicsan sababo la xiriira muuqaalkiisa oo nadiif ah oo dhalaalaya.
Naqshado badan ayaa laga heli karaa dhaldhalaalka adag iyo kan jilicsan labadaba, sidaa darteed inta badan waqtiga waxay kuxirantahay doorbid shaqsiyeed.
Biinanka dhaldhalaalka adag ayaa marka hore midab leh oo dusha sare ee biinanka ayaa la qaboojiyay.
Shiididda iyo sifaynta ayaa ka dhigaysa kuwo aan la jaan qaadi karin meelaha birta qaarkood.
Haddii aad rabto dahaadh dahab ama qalin qalin caadi ah, dhaldhalaalka adag ayaa xulasho fiican u ah qaabeyntaada.
Dhaldhalaalka adag, dhaldhalaalka ayaa lagu daraa ka hor inta dahaadhka lagu darin, dhaldhalaalka ayaa lagu daraa oo la sifeeyaa si siman isla heerka khadadka birta u dhinta. Midab kastaa waa in lagu kariyaa foornada mid mid taas oo ku kordhinaysa nidaamka iyo kharashka. Marka midabada oo dhan lagu daro markaa calaamadda ayaa elektiroonig ahaan loo hagaajin karaa dibna loo safeyn karaa si loo dhammaystiro calaamadaha. Nidaamka badan ee sifaynta ayaa ah sababta ay calaamaddu u gaari karto faahfaahin yar waxoogaa ka hooseeya dhaldhalaalka jilicsan iyo sababta qaar ka mid ah khadadka biraha ay ugu badan tahay inay ku faafaan wax soo saarka oo ay ka dhumuc yeeshaan naqshadda asalka ah Nidaamkayaga dhaldhalaalka adag waa geeddi-socod casri ah oo ka mid ah hannaanka dhaldhalaalka adag iyo farqiga ugu weyn ee u dhexeeya dhaldhalaalkayaga adag ayaa ah dhaldhalaalka dhabta ah.
Dhaldhalaalka adag, ku dar dhaldhalaalka ka hor inta aan la korontoynin ka dibna ku sifeey isla diyaaradda sida xariiqa birta. Midab kasta waa in mid mid loogu dubaa foornada, iyadoo la raadinayo tayo sare laakiin habka wax soo saarka oo kordhay iyo qiimaha. Waxay ku dartay, ka dib calaamadda waa la dhajin karaa oo la safeyn karaa si loo dhammaystiro calaamadda.Waxay qaadatay wax badan oo sifayn ah si ay awood ugu siiso calaamadda inuu gaaro waxyar oo ka yar faahfaahinta dhaldhalaalka jilicsan, iyo sababta qaar ka mid ah siligga loogu baahin karo wax soo saar iyo ka dhumuc weyn Qaab dhismeedka dhaldhalaalka adag waa qaab casri ah, farqiga ugu weyn ee u dhexeeya habka dhaldhalaalka adag ee dhaldhalaalka ah iyo dhaldhalaalkayaga adag ayaa ah dhaldhalaalka dhabta ah.
Hore: Ku iftiimiso Musmaarrada Lapel ee Madow
Xiga: Pin pin Lapel